သငျအစားအစာတှကေိုတစှတျစှတျစားတဲ့အကငျြ့ပြောကျလိုပါသလား ... ... ... ။ ။ - SANTHITSA
အခြို့သူတှဟော အစားအသောကျတှကေို တစှတျစှတျ နဲ့ ပါးစပျ နဲ့ အစား မပွတျစားခငျြနတေဲ့ အလအေ့ထ ဖွဈနတေတျပါတယျ ။ အဲဒီ အကငျြ့ဟာ မိမိခန်ဓာကိုယျကို ရှိသငျ့တာထကျ ပိုဝ
အခြို့သူမြားဟာအစားအသောကျရဲ့ အနံကိုရလေ အစာစားခငျြစိတျကို တှနျးအားပေးတဲ့ ဆာလောငျမှု ဟျောမုနျးတှေ ထှကျရှိလာလလေေ ဖွဈတတျပါတယျ ။ အဲလိုမြိုး ခဏခဏ အစာစားလိုစိတျ ဖွဈပျေါလာတဲ့အခါ ဘယျလို အစားထိုးရမယျ ဆိုတာ ပွောပွပေးခငျြပါတယျ ။
စပဈြသီး … …. … ။ ။
ထမငျးစားခြိနျ တဈခြိနျ နဲ့ တဈခြိနျကွား တဈခုခုကို စားခငျြစိတျ ဖွဈနတေယျ ဒါမှမဟုတျ ဆာနသေေးတယျဆိုရငျ စပဈြသီးကိုသာ စားပေးပါ ။
အဲလိုပွုလုပျပွီး သုံးလအကွာမှာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျဝိတျဟာ သုံးဒသမ ခွောကျပေါငျနီးပါး လြော့ကသြှားမှာ ဖွဈတယျလို့ အာဟာရ နဲ့ ဇီဝရုပျဖွဈပကျြမှု အကွောငျးလလေ့ာခွငျးတဈရပျအရ သိရတာဖွဈပါတယျ ။
အာလူးပွုတျ … …. … ။ ။
အာလူးမှာ ပါဝငျတဲ့ကစီဓာတျဟာ အစာစားခငျြစိတျကို လြော့ကစြတေဲ့ အစှမျးအာနိသငျ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ ။ အစာအိမျဟာ အာလူးကို ခဖြေကျြနစေဉျမှာ အစာအိမျ နဲ့ အူလမျးကွောငျးထဲ အခြိနျကွာစှာ ရှိနတောမို့ ဆာလောငျတဲ့ စိတျကို လြှော့ပါးစတော ဖွဈပါတယျ ။ အာလူးပွုတျကိုရှာလကာရညျနဲ့သုပျပွီး ထမငျးနဲ့စားပေးပါ ။
ခြှေးထှကျပါစေ … …. … ။ ။
လကေ့ငျြ့ခနျးမြား ပွုလုပျခွငျး ၊ ပွေးခွငျး ၊ လမျးလြှောကျခွငျး ၊ စကျဘီးစီးခွငျး ၊ ယောဂကငျြ့ခွငျး စတဲ့လှုပျရှားမှုမြားကို ခြှေးထှကျတဲ့အထိ လုပျဆောငျပေးခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲက ဆာလောငျမှုကို ခြိုးနှိမျပေးတဲ့ ဟျောမုနျး ထှကျစပေါတယျ ။
ဆာလောငျစတေဲ့ Ghrelin ဟျောမုနျး ထှကျနှုနျးကိုလညျး နညျးစပေါတယျ ။ ဒါကွောငျ့မို့ အစာစားခငျြစိတျ လြှော့ပါးအောငျ တဈနမှေ့ာ တဈနာရီခနျ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကို ခြှေးမြားထှကျ လာအောငျပွုလုပျပေးပါ ။
နံနကျစာနဲ့ပရိုတငျးဓာတျ …. … … ။ ။
သငျ့နံနကျစာမှာ ပရိုတငျးဓာတျပါဝငျ အောငျစားပေးပါ ။ နံနကျစာကိုဖွဈသလို စားခွငျးအားရှောငျပါ ။ ပရိုတငျးဓာတျပါဝငျခွငျးကွောငျ့ ဗိုကျပွညျ့တငျးပွီးဆာလောငျမှု လြှော့နညျးလာပါ လိမျ့မယျ ။ နံနကျစာထဲမှာ ပဲ ဒါမှမဟုတျ အသားတဈမြိုး ပါဝငျပါစေ ။
အခြိုနညျးသောပီကေ … … … ။ ။
ပီကဝေါးခွငျးဟာ ဦးနှောကျ နဲ့ ဆကျသှယျထားတဲ့ မေးရိုးရှိနာ့ဗျကွောကို လှုံဆျောပေးတာကွောငျ့
အာသာပွမှေုကို ဖွဈပျေါစေ ပါတယျ ။ သကွားဓာတျမပါဝငျတဲ့ ပီကကေို ဝါးမယျဆိုရငျ အခြိနျတဈနာရီကွာ တဲ့အခါတိုငျး ၁၁ ကယျလိုရီ လောငျကြှမျး စနေိုငျပါတယျ ။
အထကျကနညျးလေးတှကေို အစာမပွတျ စားခငျြလာတိုငျး ကငျြ့သုံးပေးခွငျးဖွငျ့ သငျ့ဝိတျကိုထိနျးသိမျးနိုငျပါစေ ။
# စန်ဒီမွငျ့မိုရျ #
သင်အစားအစာတွေကိုတစွတ်စွတ်စားတဲ့အကျင့်ပျောက်လိုပါသလား … … … ။ ။
အချို့သူတွေဟာ အစားအသောက်တွေကို တစွတ်စွတ် နဲ့ ပါးစပ် နဲ့ အစား မပြတ်စားချင်နေတဲ့ အလေ့အထ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။ အဲဒီ အကျင့်ဟာ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ရှိသင့်တာထက် ပိုဝ
အချို့သူများဟာအစားအသောက်ရဲ့ အနံကိုရလေ အစာစားချင်စိတ်ကို တွန်းအားပေးတဲ့ ဆာလောင်မှု ဟော်မုန်းတွေ ထွက်ရှိလာလေလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ အဲလိုမျိုး ခဏခဏ အစာစားလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လို အစားထိုးရမယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ။
စပျစ်သီး … …. … ။ ။
ထမင်းစားချိန် တစ်ချိန် နဲ့ တစ်ချိန်ကြား တစ်ခုခုကို စားချင်စိတ် ဖြစ်နေတယ် ဒါမှမဟုတ် ဆာနေသေးတယ်ဆိုရင် စပျစ်သီးကိုသာ စားပေးပါ ။
အဲလိုပြုလုပ်ပြီး သုံးလအကြာမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်ဟာ သုံးဒသမ ခြောက်ပေါင်နီးပါး လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အာဟာရ နဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု အကြောင်းလေ့လာခြင်းတစ်ရပ်အရ သိရတာဖြစ်ပါတယ် ။
အာလူးပြုတ် … …. … ။ ။
အာလူးမှာ ပါဝင်တဲ့ကစီဓာတ်ဟာ အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့ကျစေတဲ့ အစွမ်းအာနိသင် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ အစာအိမ်ဟာ အာလူးကို ချေဖျက်နေစဉ်မှာ အစာအိမ် နဲ့ အူလမ်းကြောင်းထဲ အချိန်ကြာစွာ ရှိနေတာမို့ ဆာလောင်တဲ့ စိတ်ကို လျှော့ပါးစေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အာလူးပြုတ်ကိုရှာလကာရည်နဲ့သုပ်ပြီး ထမင်းနဲ့စားပေးပါ ။
ချွေးထွက်ပါစေ … …. … ။ ။
လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ပြေးခြင်း ၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း ၊ စက်ဘီးစီးခြင်း ၊ ယောဂကျင့်ခြင်း စတဲ့လှုပ်ရှားမှုများကို ချွေးထွက်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆာလောင်မှုကို ချိုးနှိမ်ပေးတဲ့ ဟော်မုန်း ထွက်စေပါတယ် ။
ဆာလောင်စေတဲ့ Ghrelin ဟော်မုန်း ထွက်နှုန်းကိုလည်း နည်းစေပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ အစာစားချင်စိတ် လျှော့ပါးအောင် တစ်နေ့မှာ တစ်နာရီခန့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ချွေးများထွက် လာအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ ။
နံနက်စာနဲ့ပရိုတင်းဓာတ် …. … … ။ ။
သင့်နံနက်စာမှာ ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင် အောင်စားပေးပါ ။ နံနက်စာကိုဖြစ်သလို စားခြင်းအားရှောင်ပါ ။ ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဗိုက်ပြည့်တင်းပြီးဆာလောင်မှု လျှော့နည်းလာပါ လိမ့်မယ် ။ နံနက်စာထဲမှာ ပဲ ဒါမှမဟုတ် အသားတစ်မျိုး ပါဝင်ပါစေ ။
အချိုနည်းသောပီကေ … … … ။ ။
ပီကေဝါးခြင်းဟာ ဦးနှောက် နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ မေးရိုးရှိနာ့ဗ်ကြောကို လှုံဆော်ပေးတာကြောင့်
အာသာပြေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေ ပါတယ် ။ သကြားဓာတ်မပါဝင်တဲ့ ပီကေကို ဝါးမယ်ဆိုရင် အချိန်တစ်နာရီကြာ တဲ့အခါတိုင်း ၁၁ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်း စေနိုင်ပါတယ် ။
အထက်ကနည်းလေးတွေကို အစာမပြတ် စားချင်လာတိုင်း ကျင့်သုံးပေးခြင်းဖြင့် သင့်ဝိတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ ။
# စန္ဒီမြင့်မိုရ် #